192.168.1.254 Admin Ngemvume | Router Admin Login & Reset Password
192.168.1.254 is eyimfihlo Ikheli lasesizindeni esetshenziswa njenge Oxhu nab ikheli router IP amaningi imizila kanye modems. 192.168.1.254 Ngena ngemvume ivumela umphathi ukuthi afinyelele, lungiselela futhi uvuselele izilungiselelo. The IP 192.168.1.254 is reserved to use with private networks.
192.168.1.254 I-IP Address Admin Login ikuvumela ukuthi ufinyelele kumzila wakho we-ADSL. Uma umsebenzisi adinga ukufinyelela kumzila wakho ngaphandle kokusebenzisa ucingo, ikhodi yekheli le-IP 192.168.1.254 kwenza kwenzeke.
192.168.1.254 yi-IP yangasese yama-routers, imodemu, and broadbands and it simply means that the device within this private network or IP cannot be accessed directly from the internet using this private IP, kepha noma iyiphi enye idivayisi ekuxhumekeni kwenethiwekhi yendawo ingaxhuma kunoma iyiphi enye idivayisi nakuleyo nethiwekhi.
Kukhona ama-routers athile nama-modem brand afaka ama-Linksys Routers namaModem, Westell DSL modem, Alcatel Modems, 3ICom Routers, namaModemu, Billion Routers and Modems and many other brand routers which usually uses 192.168.1.254 as the default IP address for routers.
Ngena ngemvume 192.168.1.254 Ikheli le-IP
Umsebenzisi angavele aqedele 192.168.1.254 Isinyathelo sokungena ngokulandela izinyathelo.
Isinyathelo: 1- Xhuma i-PC noma idivayisi yakho kunethiwekhi yomzila ngekhebula le-ethernet noma nge-Wi-Fi.
Isinyathelo: 2- Open any of the browsers in your PC and type URL http://192.168.l. 254 in your browser.
Isinyathelo: 3- Enter the default router username and password correctly and you will be on your router IP address 192.168.1.254.
Ama-routers amaningi anekheli le-IP elizenzakalelayo le- 192.168.1.254 sebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi “admin“. Noma ngabe ukhohlwe igama lomsebenzisi ne-password yakho ye-router ungathatha usizo lwe- 192.168.1.254 Ukungena ngemvume futhi ungasetha kabusha i-router.
Setha kabusha umzila
Kuthiwani uma ngikhohlwa iphasiwedi yami?
Isinyathelo-1: Cisha noma Cisha i-Router oyisebenzisayo.
Isinyathelo-2: Cindezela bese ubamba inkinobho yokusetha kabusha kuphaneli engemuva ye- 5 ukuze 10 noma 15 imizuzwana ngophini okhombe phezulu noma ngekhampasi noma ngenaliti futhi ngasikhathi sinye qala kabusha noma uvule i-Router.
Isinyathelo- 3: Manje, khipha inkinobho yokusetha kabusha bese ulinda ukuqala kabusha kwedivayisi.
Isinyathelo 4: Manje, uzokwazi ukuxhuma ikhompyutha yedivayisi yakho kumzila wakho ngekhebula lenethiwekhi le-Ethernet noma ngokusebenzisa uxhumano lwe-Wi-Fi.
Isinyathelo 5: Xhuma kunethiwekhi futhi i-router yakho isethwe kabusha manje.
I hope this post has helped you complete 192.168.1.254 Ngena ngemvume step and complete the 192.168.1.254 Admin Ngemvume isinyathelo. Uma usenezinkinga noma ubunzima bese uphawula ngezansi bese usazisa. For more about 192.168.1.254 Ikheli le-IP, vakashela iwebhusayithi esemthethweni manje.
192.168.1.254 change password192.168.1.254 Reset Passwordhttps://192.168.1.254 Ngena ngemvume
Thumela Previous:Linksys router Ngemvume & Linksys router Ukucushwa Umhlahlandlela